Jawaab Nooce Ayey Iran Ka bixin Kartaa Dilkii Suleymaani | Xaqiiqonews
Jawaab Nooce Ayey Iran Ka bixin Kartaa Dilkii Suleymaani
Warar laga soo xigtay Warbaahinta Ciraaq ayaa xaqiijiyey in duqeyn lagu dilay nin lagu magacaabo Janaraal Suleymani, kaasi oo Iiraan u qaablisanaa howlagalada shaam iyo ciraaq.
Ma ahan markii ugu horeysay ee Iiraan rag miisaan leh laga dilay, hadii aan taariikhda dib ugu laabano, waxaa la xasuustaa markii Iiraan ay ilbiriqsi ku weysay rag cu lculus oo ay ka mid ahaayeen, madaxii garsoorka Iiraan, Xildhibaano iyo xubno wasiiro ahaa oo dhamaantood lagu dilay qarax.
Inkastoo Hogaamiyaha Ruuxiga Ayaatulaahi Khumeyni oo ka hadlay dilkan uu balan qaaday waxa uu ugu yeeray “aargudasho”, haddana dadka ku takhasusay arimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in uusan jirin waxa sababi kara dagaal toos oo dhax mara Iiraan iyo Mareykanka oo isaga sheegtay mas’uuliyadda Dilka Janaraal Qaasim Suleymaani.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo dhacdadan ka hadlay ayaa isna yiri “Calankii sharafta ee uu waday Jeneraal Suleymaani, waa ay sii sara ahaan doontaa inta ay joogaan ciidamada Islaamka” .
Dhanka kale Iiraan ayaa “ISmaaciil Qaa’ani” u mgacawday in uu noqday hogaamiyaha Garabka Qudus ee taabacsan ilaada Kacaanka Iiiraan, kaasi oo badalay Hogaamyihii dhintay ee “Qaasim Suleymaani”